Real Madrid Oo 3/1 Ugu Soo Awood Sheegatay Atletico Madrid , Booska Labaad Ayay Soo Galeen | Saxil News Network
Real Madrid Oo 3/1 Ugu Soo Awood Sheegatay Atletico Madrid , Booska Labaad Ayay Soo Galeen
February 9, 2019 - Written by editor
Atletico Madrid iyo Real ayaa ciyaarta ku bilaabay qaab dar dar leh xilli Real biloowgii aheyd kooxda ku horeysa duulaanka .
Kooxda martida loo ahaa waa looga badnaa maamulka kubadda , waxa ayna Real dagaal ugu jireen in ay gaaraan shabaqa Atletico .
Balse daafaca Atletico ayaa diidanaa isku day waliba oo ay sameynayeen Real balse guud ahaan ciyaarta waxa ay aheyd mid u furan labada dhinac inkastoo dhanka Real u janjeertay .
Daqiiqaddii 16-aad gool cajiib ah oo dhabal ah waxaa Real u dhaliyay Casemiro ka dib kubad koorno ka timid oo uu sii madaxeeyay Ramos ayuu helay Casemiro .
Ka dib goolkaas , Real ayaa weerar badneyd halka Atetico kubadaha rogaal celiska ah ku tiirsanayeen waxa ayna daqiiqaddii 25-aad dhaliyeen gool uu saxiixay Antoine Griezman inkastoo Real ku doodayeen in uu Offside ahaa waliba uu ka sii horeeyay qalad lagu soo galay balse arintaas dhag jalaq looma siin
Ka dib goolkaas , Atletico waa ay is fur fureen waa ayna soo weerar tagayeen balse halis gillin muuqata ma jirin balse kubadooda waa ay wacnaayeen .
Dhamaadkii qeybta hore , Real oo kubadaha ka jiideysay garbaha ayaa waxaa qalad lagu galay Ángel Correa waxaana Real rigoore loo dhigay u dhaliyay Sergio Ramos daqiiqaddii 43-aad waxaana lagu nastay 2/1 .
Soo loo baashadii , labada koox kubad wacan ayay soo bandhigeen waxaana ka go`naa in ay helaan goolal xilli kubadda aheyd mid u furan labada koox .
Daqiiqaddii 53-aad gool cajiib ah oo uu dhaliyay Morata kuna hubsaday shabaqa kooxdiisa hore Real ayaa loo diiday Offside ahaan balse haddii la ogalaan lahaa goolka bisha ee La Ligaha ayuu soo gali lahaa .
Daqiiqaddii 60-aad Atletico gool cajiib noqon lahaa ayuu goolhayaha Real ka bad baadiyay kubad laad xooggan oo lagu sameeyay goosha , waxa ayna ciyaarta aheyd mid marba koox gacanta ugu jirta .
Atletico , kubadooda waa ay wacneyd iyaga ayaana Real qeybihii dhamaadka uga far dhuubnaa weerarka saxda ah halka Real ay ku jireen daafac .
Xilli xaalkaas , Real neefta ayaa ka fuqdya ka markii gool sedexaad ay dhaliyeen waxaana si cajiiba h u dhaliyay Gareth Bale daqiiqadii 47-aad balse kooxda Atletico isma dhiibin isku dayo kala duwan ayay sameynayeen
Atletico xaalka ayaa ku xumaaday ka dib markii daqiiqaddii 80-aad kaarka cas laga siiyay Thomas kaasi oo kaarka digniinta koowaad horey u qaatay , waxa ayna ciyaarta ku dhamaatay 3/1